Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana ho an'ny 6-8-21 - iHorror
Home Sarimihetsika mahatsiravina Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana amin'ny 6-8-21
Sarimihetsika mahatsiravinaStreaming Movie
by James Jay Edwards Jona 8, 2021
nosoratan'i James Jay Edwards Jona 8, 2021
Fa misy inona ry Tightwads! Tightwad Terror Talata dia niverina indray miaraka amin'ny sarimihetsika maimaim-poana. Ka zahao ity…
Annabelle (2014), nahazoana lalana avy amin'i Warner Bros. Sary.
Ho fanomezam-boninahitra ny Ny fandresen-dahatra: ny Devoly no nanao ahy, andao jerena ilay voalohany tsy-mba hiantsoana mba hiantsoana-Verse sarimihetsika. Annabelle dia ny spinoff tamin'ny 2014 izay mifantoka amin'ny tantaran'ny niandohan'ilay saribakoly nalaza ratsy tamin'ny fisokafan'ny sarimihetsika voalohany. Namboarina ny tantara ary fisaka ny mpilalao, saingy mahafinaritra ny fijerena azy, na dia nesorina tamin'ny sarimihetsika hafa aza ny fampitahorana tsara indrindra.
Annabelle dia tsy dia ratsy loatra araka ny ahatsiarovan'ny olona azy, saingy tsy dia tsara toa izany Annabelle: Famoronana (ny tantara niandohan'ny TENA saribakoly). Raiso tsara ny saribakoly mampatahotra anao Eto ao amin'ny TubiTV.
Magic (1978), nahazoana lalana avy tamin'ny Twentieth Century Fox.
Miresaka saribakoly mahatsiravina…Magic dia sarimihetsika mampihoron-koditra mahatsiravina tanteraka momba ny ventriloquist miaraka amina toetrany marobe izay mamolavola ny iray amin'ireo olona ireo amin'ny volany. Ny dummy mampatahotra.
Ity sarimihetsika tamin'ny 1978 ity dia ahitana fampisehoana mahafinaritra avy amin'i Sir Anthony Hopkins, Burgess Meredith, ary Ann-Margret. Notarihin'i Richard Attenborough ihany koa avy amin'ny tantara an-tsehatra sy ny tantara nosoratan'i William Goldman miaraka amin'ny isa navoakan'i Jerry Goldsmith - izany dia maro ny mpanjaka any Hollywood eo. Ity iray ity koa dia iray amin'ireo tranofiara mahery vaika indrindra hatramin'izay, ary naseho tamin'ny fahita lavitra tamin'ny fahitalavitra izany, ka nahitana zokin-jaza iray manontolo. Raha efa te hahita an'i Hannibal Lecter mifanatrika amin'ny The Penguin ianao dia mandehana Eto ary jereo ny Magic ao Crackle.
Solace (2015), nahazoana lalana avy amin'ny FilmNation Entertainment.
fampiononana dia tsiambaratelo 2015 momba ny masoivohon'ny FBI izay nangataka ny fanampian'ny psychic iray hanampiana azy hisambotra mpamono olona. Mampalahelo ho an'ireo tovolahy tsara fanahy, mpamono saina ihany koa ilay mpamono olona, ​​ka dia nijanona teo alohan'ny fanadihadian'izy ireo izy.
fampiononana dia mampientanentana ny mpanao heloka bevava, feno fihodinkodinana ary tsy fantatry ny saina aza. Tany am-boalohany dia natsangana ho tohin'ny Se7en, izay milaza aminao izay rehetra tokony ho fantatrao. Ny mpilalao dia laharana voalohany ihany koa, miaraka amin'i Sir Anthony Hopkins (indray) ho mpitsabo saina, Jeffrey Dean Morgan ho maso ivoho FBI, ary i Colin Farrell no mpamono olona. fanadihadiana fampiononana Eto ao amin'ny Vudu.
Tantaran'ny herisetra (2005), nahazoana lalana avy amin'ny New Line Cinema),
Tantaran'ny herisetra dia miresaka momba ny mpandraharaha amin'ny tanàna kely iray izay tsy nahomby tamin'ny fanandramana nandroba tao amin'ny trano fisakafoany indray alina. Ireo tatitra vaovao manaraka dia nahatonga azy ho lasa olo-malaza ao an-toerana, izay misarika ny sain'ny mpanohitra iray izay mihevitra fa ekeny ho toy ny lehilahy nanisy ratsy azy ny taloha. Mazava ho azy fa valifaty no tadiavina.
Tantaran'ny herisetra dia sarimihetsika David Cronenberg, saingy nanomboka ny taona 2005, noho izany dia iray amin'ireo horonantsariny Oscar-bait taty aoriana, fa tsy iray amin'ireo horonan-tsarimihetsika gooey schlock tany am-boalohany. Viggo Mortensen dia milalao ny maherifo, Maria Bello no vadiny, ary i Ed Harris dia miseho ho mpanohitra. Zahao hoe Tantaran'ny herisetra Eto ao amin'ny TubiTV.
Snowpiercer (2013), nahazoana lalana avy tamin'ny RADiUS-TWC.
Mandritra ny lohahevitr'i Oscar-bait…Snowpiercer dia ilay mampihetsi-po an'i Academy Ward Winner Bong Joon Ho momba ny fiaran-dalamby izay mandehandeha tsy tapaka amin'ny tontolon'ny apokaliptika sy rakotra lanezy. Ao anaty fiaran-dalamby dia misaraka amin'ny sokajy sosialy toy ny tany ivelany ny olona.
Ity sarimihetsika 2013 ity dia niteraka andiana fahitalavitra tamin'ny taon-dasa. Na dia tsy ho an'io aza ny Oscars an'i Bong Joon Ho (ho an'ny katsentsitra), tsy ho fantatrao amin'ny mpilalao stellar, izay misy an'i Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt, Jamie Bell, Octavia Spencer, Ed Harris (indray), ary Alison Pill. Miandrasa ny Snowpiercer Eto ao amin'ny fahitalavitra IMDB.
Te-hijery sarimihetsika maimaim-poana bebe kokoa? Zahao eto ny Tightwad Terror Talata teo.
Fomba fahalalam-pomba sary Chris Fischer.
Tantaran'ny herisetraAlison PillAnn-MargretAnnabelleAnthony hopkinsBong joon-hoBurgess MeredithChris EvansColin FarrellCrackleed harrisFreeSarimihetsika maimaim-poanaSarimihetsika maimaim-poana amin'ny InternetFahitalavitra IMDBIMDBTVJamie BellJeffrey Dean MorganJerry GoldsmithJohn HUrtMagicMaria BelloOctavia spencerRichard Attenboroughsnowpiercerfampiononanatery henjana ny talataTilda Swintontubi tvtubitvViggo MortensenWilliam Goldman
James Jay Edwards dia mpitsikera horonantsary ary mpanao kolontsaina pop ao San Diego, Kalifornia. Mpikambana ao amin'ny SDFCS sy OFCS izy, ary manana mari-pahaizana sarimihetsika avy amin'ny SDSU sy ASU. Tiany koa ny fanafohezan-teny.
'Mitsangana amin'ny maty ratsy' dia manomboka ny famokarana ary mizara sary mahafinaritra
Mangataka ny mpitantana ny tranofiara 'Karen' ...
Zoinks! 'Scooby Doo' mihaona amin'ny 'Courage The Cowardly Dog' ...
'Spiral' dia napetraka hanafika ny tranonao ao ...
Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana amin'ny 6-22-21
'Tantara Mampihoron-koditra Amerikanina' dia mitondra antsika hiverina amin'ny vanim-potoana ...
Manome soso-kevitra amin'ny fiverenan'i ... ny Teaser Vaovao an'i Dexter.